အရမ်းဖတ်ကောင်းတဲ့ ပညာပေး စာလေးပါ…. – စှယျစုံသုတ
( ၁ ) တစ်နေ့မှာ လူတစ်ယောက်ဟာ chattingမှာ ခင်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ချိန်းခဲ့တယ်။အဲဒီကောင်မလေးကို သူ မမြင်ဖူးသေးတော့ အရုပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေး ဖြစ်မှာ စိုးတာနဲ့သူ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို ကောင်မလေးနဲ့ တွေ့ပြီး ၁၀မိနစ် အကြာမှာသူ့ဟမ်းဖုန်းကို ဆက်ဖို့ မှာခဲ့တယ်။ ဒါမှ သူ လစ်ထွက်လို့ အဆင်ပြေမယ်လေ။
ဒီလိုနဲ့ ချိန်းထားတဲ့ နေရာ ရောက်တော့ ကောင်မလေး ချောချော ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ဖုန်းမမြည်ပါစေနဲ့လို့ သူကျိတ်ပြီး ဆုတောင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ကောင်မလေးရဲ့ဖုန်းက မြည်လာတယ်။၂မိနစ်လောက် စကားပြောပြီး ကောင်မလေးက သူ့ဖက်လှည့်ပြီး “ ဆောရီးနော်…အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စ ရှိလို့ ကျွန်မကို သွားခွင့်ပြုပါဦး” တဲ့။
( ၂ ) ဝိုင်အရမ်းကြိုက်တဲ့ သူဌေးတစ်ယောက်က ညအိပ်ယာ ဝင်တိုင်း ဝိုင်တစ်ခွက်သောက်လေ့ရှိတယ်။ အခုတစ်လော သူသောက်နေကျဝိုင်က လျော့လျော့လာလို့အိမ်က အစေခံ ခိုးသောက်တယ် အထင်နဲ့ ဝိုင်ထဲကို ကျင်ငယ်ရေ ရောလိုက်တယ်။ကျင်ငယ်ရေ ရောထားလည်း ဝိုင်က လျော့နေတုန်းပဲမို့ သူဌေးက စိတ်ဆိုးပြီး အစေခံကို
ခေါ်မေးပါတော့တယ်။ “ကျွန်တော် မခိုးသောက်ရပါဘူး” အစေခံက ငြင်းပါတယ်။ဆက်ပြီး “ သူဌေးမင်းကို ဟင်းကောင်းတွေ ချက်ကျွေးချင်လို့ ဟင်းကြော်တဲ့အချိန်ဝိုင်နည်းနည်း ထည့်မိတာပါ” လို့ ဖြေပါတယ်။
ရေးထားတဲ့ စာကို တွေ့လိုက်တယ်။သူတစ်ပါးကို ပေးတဲ့အရာက ကိုယ့်အတွက် ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ မှန်ကြည့် နေတဲ့လူတစ်ယောက်လိုပေါ့။ ကိုယ်ပြုံးရင် မှန်ထဲက လူလည်း လိုက်ပြုံးတယ်။ ကိုယ်မဲ့ရင်လိုက်မဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကဗျာဆရာ W.H.Auden က “မကောင်းတာ လုပ်တဲ့လူဟာ
လူတွေကို ချီးကျူးရင် ကိုယ်လည်း တစ်နေ့ ပြန်အချီးကျူးခံ ရမယ်။(ဤနေရာတွင် မြှောက် ဖား ပင့် ကော်လို့ မထင်စေချင်) “သူ့ကို ပေးတာဟာနောက်တော့ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ဖြစ်သွားတတ်တယ်”
( ၄ ) လယ်သမားတစ်ဦး စိုက်ထားတဲ့ ပြောင်းဖူးက အသီးနှံပြိုင်ပွဲမှာ နှစ်တိုင်း ဆုရတယ်။ ရတဲ့ဆုကို တစ်ခြားလယ်သမားတွေကို သူအမြဲမျှဝေခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲလို့လူတွေက မေးတော့ “ဝတ်မှုန်တွေက လေကြောင့် အရပ်လေးမျက်နှာပြန့်နေတယ်။တကယ်လို့ ကျွန်တော့်ခြံဘေးက လယ်သမားတွေဟာ မျိုးမကောင်းတဲ့ ပြောင်းဖူးကို
စိုက်ခဲ့ရင် ကျွန်တော့်စိုက်ထားတဲ့ ပြောင်းဖူးကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်တယ်။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်တွေကို သူတို့စိုက်ခဲ့လို့ ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်။ ဆုတွေက ကျွန်တော့် အတွက်ဖြစ်သလို သူတို့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ လူတွေရဲ့ မေတ္တာကိုလိုချင်ရင် လူတွေကို မေတ္တာအရင်ထားတတ်ရမယ်။ဂရုစိုက်တာခံချင်ရင် လူတွေကို အရင်ဂရုစိုက်တတ်ရမယ်။အရာအားလုံးဟာ ရောင်ပြန်ဟပ်စမြဲပဲလေ..
အရမျးဖတျကောငျးတဲ့ ပညာပေး စာလေးပါ….
” ရောငျပွနျ ”
( ၁ ) တဈနမှေ့ာ လူတဈယောကျဟာ chattingမှာ ခငျတဲ့ ကောငျမလေးနဲ့ခြိနျးခဲ့တယျ။အဲဒီကောငျမလေးကို သူ မမွငျဖူးသေးတော့ အရုပျဆိုးဆိုးကောငျမလေး ဖွဈမှာ စိုးတာနဲ့သူ့ သူငယျခငျြး တဈယောကျကို ကောငျမလေးနဲ့ တှပွေီ့း ၁၀မိနဈ အကွာမှာသူ့ဟမျးဖုနျးကို ဆကျဖို့ မှာခဲ့တယျ။ ဒါမှ သူ လဈထှကျလို့ အဆငျပွမေယျလေ။
ဒီလိုနဲ့ ခြိနျးထားတဲ့ နရော ရောကျတော့ ကောငျမလေး ခြောခြော ဖွဈနတောကိုတှလေို့ကျတယျ။ ဒါနဲ့ ဖုနျးမမွညျပါစနေဲ့လို့ သူကြိတျပွီး ဆုတောငျးလိုကျတယျ။ဒါပမေယျ့ အဲဒီအခြိနျမှာ မမြှျောလငျ့ဘဲ ကောငျမလေးရဲ့ဖုနျးက မွညျလာတယျ။၂မိနဈလောကျ စကားပွောပွီး ကောငျမလေးက သူ့ဖကျလှညျ့ပွီး “ ဆောရီးနျော…အရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စ ရှိလို့ ကြှနျမကို သှားခှငျ့ပွုပါဦး” တဲ့။
( ၂ ) ဝိုငျအရမျးကွိုကျတဲ့ သူဌေးတဈယောကျက ညအိပျယာ ဝငျတိုငျး ဝိုငျတဈခှကျသောကျလရှေိ့တယျ။ အခုတဈလော သူသောကျနကေဝြိုငျက လြော့လြော့လာလို့အိမျက အစခေံ ခိုးသောကျတယျ အထငျနဲ့ ဝိုငျထဲကို ကငျြငယျရေ ရောလိုကျတယျ။ကငျြငယျရေ ရောထားလညျး ဝိုငျက လြော့နတေုနျးပဲမို့ သူဌေးက စိတျဆိုးပွီး အစခေံကို
ချေါမေးပါတော့တယျ။ “ကြှနျတျော မခိုးသောကျရပါဘူး” အစခေံက ငွငျးပါတယျ။ဆကျပွီး “ သူဌေးမငျးကို ဟငျးကောငျးတှေ ခကျြကြှေးခငျြလို့ ဟငျးကွျောတဲ့အခြိနျဝိုငျနညျးနညျး ထညျ့မိတာပါ” လို့ ဖွပေါတယျ။
( ၃ ) လူတဈယောကျက ဘားတဈခုမှာ ဘီယာသောကျနတေုနျး အပေါ့ သှားခငျြလာတာနဲ့ အိမျသာ သှားမလို့ လုပျရငျး သူ့ဘီယာကို တခွားလူ ခိုးသောကျမှာ စိုးတာနဲ့“ဘီယာထဲ တံထှေး ထှေးထညျ့ထားတယျ” လို့ စာရေးကပျထားလိုကျတယျ။အပေါ့သှားပွီး ပွနျလာတော့ သူ့စာဘေးမှာ “ငါလညျး ထှေးထညျ့လိုကျပွီ” လို့
ရေးထားတဲ့ စာကို တှလေို့ကျတယျ။သူတဈပါးကို ပေးတဲ့အရာက ကိုယျ့အတှကျ ဖွဈသှားတတျတယျ။ မှနျကွညျ့ နတေဲ့လူတဈယောကျလိုပေါ့။ ကိုယျပွုံးရငျ မှနျထဲက လူလညျး လိုကျပွုံးတယျ။ ကိုယျမဲ့ရငျလိုကျမဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ ကဗြာဆရာ W.H.Auden က “မကောငျးတာ လုပျတဲ့လူဟာ
မကောငျးတာကိုပဲ ပွနျရမယျ” တဲ့။ လူတဈပါးကို ခြောကျတှနျးရငျ ကိုယျလညျး တဈနပွေ့နျအတှနျးခံရမှာ မလှဲဘူး။ လူတှကေို ပြျောရှငျတာတှေ ပေးရငျ ကိုယျလညျးပြျောရှငျတာပွနျရမယျ။
လူတှကေို ခြီးကြူးရငျ ကိုယျလညျး တဈနေ့ ပွနျအခြီးကြူးခံ ရမယျ။(ဤနရောတှငျ မွှောကျ ဖား ပငျ့ ကျောလို့ မထငျစခေငျြ) “သူ့ကို ပေးတာဟာနောကျတော့ ကိုယျ့အတှကျပဲ ဖွဈသှားတတျတယျ”
( ၄ ) လယျသမားတဈဦး စိုကျထားတဲ့ ပွောငျးဖူးက အသီးနှံပွိုငျပှဲမှာ နှဈတိုငျး ဆုရတယျ။ ရတဲ့ဆုကို တဈခွားလယျသမားတှကေို သူအမွဲမြှဝခေဲ့တယျ။ ဘာကွောငျ့လဲလို့လူတှကေ မေးတော့ “ဝတျမှုနျတှကေ လကွေောငျ့ အရပျလေးမကျြနှာပွနျ့နတေယျ။တကယျလို့ ကြှနျတေျာ့ခွံဘေးက လယျသမားတှဟော မြိုးမကောငျးတဲ့ ပွောငျးဖူးကို
စိုကျခဲ့ရငျ ကြှနျတေျာ့စိုကျထားတဲ့ ပွောငျးဖူးကိုလညျး ထိခိုကျနိုငျတယျ။ မြိုးကောငျးမြိုးသနျ့တှကေို သူတို့စိုကျခဲ့လို့ ကြှနျတျောဝမျးသာပါတယျ။ ဆုတှကေ ကြှနျတေျာ့ အတှကျဖွဈသလို သူတို့အတှကျလညျးဖွဈပါတယျ” လို့ ပွနျဖွခေဲ့တယျ။ လူတှရေဲ့ မတ်ေတာကိုလိုခငျြရငျ လူတှကေို မတ်ေတာအရငျထားတတျရမယျ။ဂရုစိုကျတာခံခငျြရငျ လူတှကေို အရငျဂရုစိုကျတတျရမယျ။အရာအားလုံးဟာ ရောငျပွနျဟပျစမွဲပဲလေ..